Madaxweyne Axmed Madoobe “Shirkii Kismaayo Ka Dhacay Soomaaliya Wax Weyn Ayuu U Taraa” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweyne Axmed Madoobe “Shirkii Kismaayo Ka Dhacay Soomaaliya Wax Weyn Ayuu U Taraa”
11th October 2017 Xuseen Axmed Af Soomaali 0
Magaalada kismaayo ee Caasimada KMG ah ee Jubbaland waxaa maanta lagu soo gaba gabeeyay Shirka wadatashiga Madaxda Dowladaha xubnaha ka ah JFS kaas oo socday labadii maalmood ee lasoo dhaafay.
Gunaanadka shirkan waxaa kasoo qayb galay Xildhibaano katirsan labada Aqal ee Baarlamaanka Jamhuuriyada Federaalka ah ee Soomaaliya Madaxda Dowlad Goboleedyada iyo masuuliyiin kale.
Madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam oo ka hadlay gaba gabada shirka ayaa sheegay in shirkan uu Soomaaliya wax weyn u tarayo isla markana ay wax badan ka qabsoomeen wada hadaladii ay madaxdu yeesheen.
Madaxweynahu wuxuu sheegay in wax walba oo dastuurka saldhig u ah ya tahay in la raaco taas oo qiyam ka dhigaysa go’aamada iyo afkaaraha jira.
Nidaamka Federaalka ah ee soomaaliya ayuu sheegay Madaxweynahu in sida ay tahay hadii aan loo raacin wax badan ay ka imanayaan oo jaha wareer ah isagoo ku booriyay madaxda Soomaalidu in ay ka dhabeeyaan nidaamka ay madaxda ku yihiin oo sharciga iyo waxa uu qabo ay raacaan.
Madaxda Cusub ee Dowladaha xubnaha ka ah Jamhuuriyada Federaalka ah ee Soomaaliya ayuu sheegay in ay tahay mid dastuurku uu dhigayo in iskaashi buuxa ay yeelan karaan oo ay samaystaan xiriir dhinacyada amaanka Dhaqaalaha iyo Siyaasada ah.
Arimaha amaanka ayuu Madaxweynahu xusay in aan natiijo fiican laga gaari Karin hadaan siyaasada lagu heshiin isagoo ka digay in hoos lo dhigo tirade Ciidamada AMISOM balse taas badalkeeda marka hore la dhiso Ciidamo qaran oo amaanka hanan kara.
Doorashooyinka 2020 ayuu Madaxweynahu sheegay in ay tahay in wakhtigan laga sii shaqeeyo oo la isla qeexo siyaasada halkaas lagu gaarayo balse hadii sanadka u danbeeya la bilaabo aanay waxba qabsoomi doonin.
Xeerarka iyo sharciyada ay Xukuumadu meel marinayso ayuu cadeeyay in ay qasab tahay in lagala tashado Bulshada iyo dhinacyada ay qusayso kahor inta aan la meel marin si hadhow uuna jaha wareer u iman.
Madaxda Soomaalida ayuu Madaxweynahu ku booriyay in ay ku dadaalan sidii is fahan guud loogu xalin lahaa kala argti duwananta jirta isla markana dalku uu horay ugu socon lahaaa.
Akhri:-Xiliga La Qabanaayo Doorashada Madaxweynaha Galmudug Oo La Shaaciyay
Madaxweyne Farmaajo Oo Ku Baaqay Midnimo & Wada-shaqeyn